Cali Khaliif Galaydho hadii Somaliland ay Khaatumo soo hor fadhiisanayso maxaannu Siyaad Barre uula dagaala maynay isagaaba ku dhaamay e | Somaliland Today
← UCID xisbi qaran baa la moodayay ee ma xisbi qabiil buu noqday maxay se Gabiley ka yidhaahdeen dadba wada yaab ye by Abdi Mustafe
Daawo: Guddoomiyaha Xisbiga UCID Oo Sheegay In Diwaangalintii Madanigu Fashilantay. →
Cali Khaliif Galaydho hadii Somaliland ay Khaatumo soo hor fadhiisanayso maxaannu Siyaad Barre uula dagaala maynay isagaaba ku dhaamay e
Cali Khaliif doqon niimadu wey ku sii korodhaa. Ku lahaa khaatumo iyo Somaliland.
ha isa soo hor fadhiistaan. Khaatumo wax la yidhaa meelna kama jirto Calina wuxuu ku riyooday isagoo madaxweyna ah oo riyadii buu rumaystay. Cali Khaliif adigii baaba lagu gaadayaa oo lafdhan jananka diidaa xabsiga ayuu liinta ku cabaa. Hadaba marka ciidamada Somaliland gacanta kugu dhigaan gurigaagu wuxuu noqon doonaa Jailka Mandheera ee ku bushaareyso. Cali isagii baa dey-dey ah oo sidii haad geed waayey wal hanaya mar kaasuu ku leeyey Khaatumo iyo Somaliland wada hadal ha ku dhamaystaan khilaafka. Haw fadhiyin hana ku riyoon ee adigu xadhig iska badbaadi. Mida kale khaatumada aad tuurta ku sidato waad u dhalatay ee dib weligaa ma uugu soo noqotay …Jawaabtu waa maya…. Maantana Cali wuxuu la niiq leeyey waa naaqus nimo. Cali cidla ayuu ka hadlayaa iyo dhirta hoos teeda oo malaha meeqaam Somaliland kula kulanto ee halkaa ha ka sii jiiq leeyo inta gacanata lagu soo dhigayo.